Igbo, John: Lesson 092 - Ịnọgide na mmekọrịta Nna anyị na-egosi na anyị hụrụ ibe anyị n'anya (Jọn 15:9-17) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 092 (Abiding in the Father's fellowship appears in mutual love)
2. Ịnọgide na mmekọrịta Nna anyị na-egosi na anyị hụrụ ibe anyị n'anya (Jọn 15:9-17)
9 Dika Nnam hurum n'anya, Mu onwem ahuwo kwa unu n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m.
Nna ahụ hụrụ Ọkpara ahụ n'anya nke na ọ kewara eluigwe n'oge baptism ya na Jọdan. Mmụọ nsọ wee gbadata n'ụdị nduru, e wee nụ olu, "Nke a bụ Ọkpara m ọ hụrụ n'anya, onye ihe m masịrị ya." Nkwupụta a banyere Atọ n'Ime Otu dị nsọ bụ na e mere Jizọs baptism, ọ bụ mmalite nke Nwa Atụrụ Chineke na ụzọ ya iji chụọ àjà. Ọkpara ahụ mezuru uche Nna ya, na-agbapụta onwe ya maka mgbapụta anyị. Ihunanya ahu abughi nani Nna na Okpara, kama ha di n'otu n'inwe obi maka uwa ojo a, na-akwadebe maka mgbapụta di ebube.
Jizos hr anyi n'anya dika ihn'anya Nna ya. Ebe obu na o rubere isi, anyi abughi. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị mụrụ site na mgbe ebighị ebi tupu afọ. Ihe mere bụ na Ọkpara ahụ họọrọ anyị ndị mmehie ma mee ka anyị dị ọcha. O nyere anyị ọmụmụ nke abụọ nke Mmụọ nsọ wee doo anyị nsọ. A dịghị ahụ anyị dịka ihe eji egwuri egwu n'aka ya ka a kwatuo anyị. Ọ na-eche banyere anyị ogologo ụbọchị nile, na-eche banyere nchegbu Chineke. Ọ na-arịọchitere anyị akwụkwọ ma na-edegara anyị akwụkwọ ozi ịhụnanya. Ọ na-agba anyị ume inwe okwukwe, ịhụnanya na olileanya. Ọ bụrụ na anyị ga-ezukọta ịhụnanya nile nke ndị nna na ndị nne nọ n'ụwa na-eme mgbe nile ma mee ka ịhụnanya nke adịghị ọcha na nrụrụ aka mmadụ dị ọcha, ihe niile yiri obere ka e jiri tụnyere ịhụnanya Jizọs n'ebe anyị nọ nke na-adịghị ada ada.
10 Ọ bụrụ na ị na-edebe ihe m nyere n'iwu, ị ga-anọgide n'ịhụnanya m; ọbụna dị ka m debere iwu Nna m, ma nọgide n'ịhụnanya ya.
Jizọs dọrọ gị aka ná ntị, sị, "Ekewapụla onwe gị n'ịhụ m n'anya, m hụrụ gị n'anya ma na-atụ anya ihe àmà nke ịhụnanya gị n'ebe m nọ, olee ebe ekpere gị dị, dịka njikọ njikọ ekwentị na heaven? Ebee ka onyinye gị nye ndị nọ ná mkpa na-azaghachi Ọrụ nzọpụta m Ana m agba gị ume ime ihe dị mma ma dị mma, na-enwe obiọma na ịdị nsọ: bịnọ n'ịhụnanya m: Mmụọ Nsọ ga-akpali gị ime ezi ihe, dịka Chineke na-eme ezi mgbe niile."
Ọ bụ mmehie ịghara ịhụ n'anya dịka Chineke hụrụ n'anya. Kraist choro ibuli ayi rue uzo nke ebere Chineke, "meere ebere dika mu na Nna ayi nwere obi ebere". I nwere ike iche na nke a agaghị ekwe omume. I kwesiri, ma ọ bụrụ na okwu ahụ dị n'etiti echiche mmadụ. Ma ị maghị ihe Kraịst chọrọ, ihe ọ ga-arụ ọrụ n'ime gị. Ọ na-awụkwasị Mmụọ ya n'ime gị, ka i wee nwee ịhụnanya dị ka ọ hụrụ n'anya. Na mmụọ a Pọl na-ekwu, "M nwere ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."
Jizos gbara àmà banyere eziokwu ah nao dighi agabiga ókè site n'ihe nke kweko ro uche nke Nna ya kama ini gide n 'ihn'anya Chineke mgbe niile. Kraist na eweta udo nke Chineke n'ime anyị, ekpere na Mmụọ, na ọrụ ịhụnanya.
11 Okwu ndia ka M'gwaworo unu, ka ọṅùm we digide nime unu, ka ewe me kwa ka ọṅù-unu zuo ezu.
Onye obi ojoo maara obi madu nao non 'nsogbu dika obughi Chineke. Kraist nke nerubere uzo nke Nna ya juputara na obi uto. N'ime obi ya, e nwere abụ na otuto n'emechighị. Ọ chọrọ inye anyị, tinyere nzọpụta ya, oké osimiri nke ịhụnanya n'ime. Chineke bu Chineke obi uto.
Ejiri obi uto di ka nkpuru nke abia n'ime akwukwo nke nkpuru nke Mo. Ebe a na-enye mmehie, obi ụtọ na-adị. Kraist choro ime ka nzo puta nke nzo puta di nime anyi ka o wee jubiga ókè nye ndi ozo. Onye na-enwe ọṅụ enweghi ike ịnọgide na-enwe ọṅụ na onwe ya, kama ọ na-achọ ịzọpụta ndị ọzọ maka mgbaghara na obi ụtọ nke mmesi obi ike na Chineke. Mgbe ahụ ọṅụ anyị ga-ezu dịka ọtụtụ ndị a zọpụtara. Dị ka onyeozi ahụ kwuru, "Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile ma biakute ihe ọmụma nke eziokwu." Ikwusa ozi ọma bụ isi iyi nke ọṅụ na-agbanye n'ọgba aghara na nhụjuanya.
12 Nka bu ihe M'nyere n'iwu, ka unu hurita ibe-unu n'anya, dika M'huru unu n'anya. 13 Ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya kari nka, ka madu we rapu ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.
Jizọs hụrụ anyị n'anya, mara aha anyị, ihe odide na oge gara aga. Ọ na-eche banyere nsogbu na nsogbu anyị. O nwere atụmatụ na enyemaka maka ọdịnihu anyị. Ọ dị njikere mgbe nile iji mkparịta ụka na-akparịta ụka, ọ na-agbaghara mmehie anyị ma na-adọta anyị n'ime ndụ dị nsọ n'eziokwu na ịdị ọcha.
Dị ka Jizọs hụrụ anyị n'anya, ọ chọrọ ka anyị hụ ibe anyị n'anya. Anyị na-aghọtakwu ndị ikwu anyị na ndị enyi anyị, na-eche maka ọnọdụ ha na nsogbu ha. Anyị na-amalite ịghọta ihe ha bu n'obi na àgwà ha. Anyị na-achọta ngwọta maka nsogbu ha, ma na-enye ha enyemaka aka ike, na-ewepụta oge na ha. Ọ bụrụ na ha emehie ihe, anyị na-agbaghara ha ma soro ha, ọ bụghị ikwupụta mmejọ na mmejọ ha.
Jizọs gosipụtara ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ịhụnanya ná ndụ ya. Ọ bụghị nanị na ọ na-ekwu ma na-enyere aka, kama ọ chụrụ onwe ya nye ndị mmehie. Ọ bụghị nanị na ọ dịrị ndụ n'ihi anyị ma nwụọ n'ọnọdụ anyị. Cross bụ okpueze ịhụnanya, na-akọwa anyị ịhụnanya Chineke. Ọ na-achọ ka anyị tinye ozi nke nzọpụta na ịchụ àjà n'oge na ego.
Ọ bụrụ na ọ kpọọ anyị ka anyị soro ndị ọzọ kerịta Oziọma ahụ, ma mee ihe n'ihu ha ihe Jizọs mere maka anyị, ọ ga-atụ anya na anyị ga-enye onwe anyị, ihe onwunwe anyị na ume anyị. Ọ na-ekpe ekpere maka ndị na-arịa ya, ma na-emeso ha dịka ndị enyi. O kpere ekpere maka ndị iro ya, "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme".
Ọ bụghị nanị na ọ kpọrọ ha ụmụnne ma ọ bụ ụmụ Chineke, kama ọ bụ ndị a hụrụ n'anya. Nye ndị na-ekwesịghị inweta ịhụnanya ya, ọ nwụrụ maka mgbapụta dị otú ahụ.
14 Unu bu ndi enyi m, ma oburu na unu eme ihe obula m nyere unu n'iwu. 15 Mu onwem akpọghi kwa unu ndi-orù: n'ihi na orù ahu amaghi ihe onye-nwe-ya nēme. Ma Mu onwem akpọwo unu ndi-eyì: n'ihi na ihe M'nuru site n'ọnu Nnam ka M'meworo ka unu mara.
Chineke na-akpọ unu "ndị m hụrụ n'anya". Ọ na-eme nke a n'otu n'otu. Ị nwere ike ịnọpụ iche, n'enweghị onye ga-agbanye. Lelee Jizọs onye nwụrụ maka gị ma dịrị ndụ maka gị. Ọ bụ ezigbo enyi gị, mgbe niile njikere inyere aka. Ọ maara echiche gị, ma na-echere gị nzaghachi. Ọnọdụ nke ịnọ na enyi ya bụ na anyị hụrụ mmadụ niile n'anya dị ka ọ hụrụ ha n'anya. Mmadu abuo apugh iguzogide na ndi ozo mgbe ha na-akowa onwe ha dika ndi huru Kraist n'anya. Enyi ya chọrọ ka anyị hụ ibe anyị n'anya. Ọ kpọrọ anyị onye ọ hụrụ n'anya. Anyị nwe ya n'ihi na o kere anyị, o nwekwara ikike ịgwọ anyị dịka ndị ohu. O meela ka anyị nwere onwe anyị pụọ yok nke ịgba ohu ma kpọlite ​​anyị. Ọ na-agwa anyị ọrụ ya. Ọ dịghị ahapụ anyị amaghị ma na-akụziri anyị aha Nna, ike nke obe na ịhụnanya nke Mmụọ Nsọ. Site n'igosi ayi ihe omimi nke Atọ n'Ime Otu di ozo kpugheere ayi eziokwu nke zoro ezo nke ebighebi. Nna ahụ mere ihe ndị a n'aka ya iji kpugheere anyị ya. Ọbụbụenyi ya dị oke mma ruo n'ókè ọ na-enye anyị ohere ikere òkè na ọrụ, ihu ọma, nsọpụrụ, ike na ndụ. Ọ naghị ejide ikike nke ịmalite ma ọ bụ ịbụ nwa, kama ọ na-adọta anyị onwe ya ịghọ ụmụ Chineke.
16 Ọ bụghị unu họọrọ m, kama ọ bụ m họọrọ unu, m họpụtakwara unu, ka unu wee gaa mịa mkpụrụ, ka mkpụrụ unu wee nọgide; na ihe ọ bụla ị ga-arịọ Nna m n'aha m, ọ ga-enye gị ya. 17 Ana m enye unu iwu ndị a, ka unu wee hụ ibe unu n'anya.
Mmekọrịta gi na Jizos abughi obi gi, ochicho ma o bu ihe omuma gi, kama n'ama ya, ntuli aka na oku. Ị bụ ohu maka mmehie gị, n'ọchịchị Setan na mpaghara ọnwụ. I nweghị ike ịpụ n'ụlọ mkpọrọ, mana Jizọs họọrọ gị site na mgbe ebighị ebi ma wepụ gị ọbara ya dị oké ọnụ ahịa. O mere gị enyi, ma họpụta gị onye nketa maka ikike nke ịbụ nwa.
Nhoputa ndi ochichi ya bu nke amara. Ọ bụ ma ịhọrọ ya ma ọ bụ. Jizọs họọrọ mmadụ niile mgbe ọ kpuchiri mmehie gị n'elu obe. Ọ bụghị mmadụ nile na-anụ oku ya, kama ọ na-ahọrọ ịnọ na ụfụ nke mmehie. Ha amaghị nnwere onwe nke ụmụ Chineke. Kraịst akpọwo gị ka ị nwere onwe gị pụọ na mmehie na mkpakọrịta Chineke. Zụ onwe gị n'ịhụnanya. Nnwere onwe gị nwere otu ebumnuche, na-ejere Onyenwe gị na ụmụ mmadụ ozi afọ ofufo. Enweghị mmanye dị ka ndị ohu. Jizọs ghọrọ ohu nke afọ ofufo maka ịhụnanya. Ọ bụ ụkpụrụ anyị, ọ bụghị ilekọta onwe ya, mana nchegbu ya bụ maka ndị ọ hụrụ n'anya.
N'ihi ya, ọ na-agụsi gị agụụ ike igosi nchegbu maka ndị enyi gị, dị ka onye ọzụzụ atụrụ maka atụrụ ya. Ebe ọ bụ na ikike anyị dị oke, mmadụ enweghị ike ịtọhapụ onye ọ bụla site na ịgba ohu. Jizọs na-agba anyị ume ikpe ekpere n'aha ya. N'ihi na ọ bụrụ na anyị ekpegara Jizọs ekpere na ọ ga-eduzi ndị a tọhapụrụ ma wulite ha n'omume na n'ụzọ ime mmụọ, ma nye ha ihe nile ha chọrọ maka ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ, Onyenwe anyị ga-aza dị ka ezi obi ụtọ ya si dị. Ihe nzuzo nke ekpere a zara bụ ịhụnanya. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere maka ndị enyi gị n'ime mmụọ a, Jizọs ga-egosi gị mmehie gị, ma duga gị na ndụ nwere amamihe na nke bara uru na n'ekpere ziri ezi na ịkụda na ịdị umeala n'obi. Onyenwe anyị ga-aza ma ọ bụrụ na ị rịọrọ maka nzọpụta na ịdị nsọ iji ruo ndị enyi gị. Anyị na-akpọ gị ka ị nọgide na-ekpe ekpere. Jizos ekweghi gi nkwa na i ghaghi ighapu ihe ma nkpuru nke ga adi. Onye kwere na ekpere na àmà gi, gadi ndu rue mgbe ebighebi, naga site n'onwu rue ndu.
N'elu ma karịa okwukwe, ekpere na àmà, Jizọs nyere gị iwu ka ị hụ ndị enyi gị, ịhụnanya dị ọcha na nke dị ọcha. Na-ejide ha n'atụghị egwu, n'agbanyeghị na ha siri ike. Nwee obi oma n'ebe ha no, dika Chineke di nwayo n'ebe i no. Mee ka ìhè nke ịhụnanya Chineke dịrị ụwa nke rụrụ arụ na njakịrị. Zụzie onwe gị n'ije ozi, ịchụ àjà, ige ntị na ịzaghachi. Ka ịhụnanya Kraịst na-enwu site n'aka gị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị, n'ihi na ị napụtara anyị n'agbụ nke mmehie ma mee ka anyị bụrụ ndị ị hụrụ n'anya. Ka anyị mụta ịhụ mmadụ n'anya dị ka ị hụrụ anyị n'anya. Anyị na-efe gị, ma debe onwe gị. Kụziere anyị irube isi, ka anyị wee nwee ike ịmịpụta mkpụrụ nke ịhụnanya n'ụba.
Olee otú Jizọs si mee ka ndị ohu nke mmehie ghọọ ndị a hụrụ n'anya?